Best Futuristic Upcoming Smartphones Expected in 2020 | Net Guide
Home Article Best Futuristic Upcoming Smartphones Expected in 2020
2020 မှာ သငျ့အနနေဲ့ ဘယျလိုစမတျဖုနျးမြိုးကို ရှေးခယျြဝယျယူဖို့ ပွငျဆငျနသေလဲ . . .? သငျကိုငျဆောငျခငျြတဲ့ စမတျဖုနျးမြိုးကရော ဈေးကှကျထဲကိုရောကျနပွေီလား . . . ? အောကျမှာတော့ ယခုနှဈအတှငျး သငျ့အနနေဲ့ မဖွဈမနေ စောငျ့ဆိုငျး ဝယျယူသငျ့တဲ့ ဖုနျးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ . . . ။
Apple အနနေဲ့ နောကျဆုံးမိတျဆကျထားတဲ့ iPhone XR မှာ LCD screen ကိုသာသုံးထားပါတယျ။ 2020 မှာတော့ ပွောငျးလဲမှုတှကွေုံရမှာပါ။ အသဈထှကျလာမယျ့ iPhone XII ဖုနျးတှမှောတော့ OLED screens ကို သုံးလာမယျလို့ သိရပါတယျ။ ပွီးတော့ မြိုးဆကျသဈဖုနျးတှမှော 5G ကှနျရကျခြိတျဆကျမှုကို ထညျ့သှငျးလာမယျလို့လညျး သိရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ AI ပိုငျးမှာလညျး ပိုကောငျးလာဖို့မြှျောလငျ့နကွေပါတယျ။ iPhone XII Pro နဲ့ iPhone XII Max ကို 2020 ခုနှဈ စကျတငျဘာလမှာ ကွညောမှာဖွဈပွီး သူတို့မှာ 6GB RAM ပါလာမယျလို့ Barclays ရဲ့ လလေ့ာဆနျးစဈသူ Blayne Curtis ကပွောပါတယျ။ ဒါဟာ ကွိုဆိုခငျြစရာကောငျးလှတဲ့ ဆငျ့ကဲပွောငျးလဲတိုးတကျမှု ဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ iPhone 11 Pro နဲ့ iPhone 11 Pro Max တှမှော 4GB RAM ပဲပါလာတာပါ။ ပုံမှနျ iPhone XII မှာတော့ iPhone 11 အတိုငျး 4GB RAM ပဲပါလာမယျလို့ သတငျးထှကျလာပါတယျ။ DigiTimes က 2020 iPhone တှမှော 120Hz Screen ပါမယျလို့ အရငျက သတငျးပေးထားပါတယျ။ iPad Pro တှရေဲ့ Refresh Rate နဲ့တူသှားမှာပါ။ဒါပမေယျ့iPadတှရေဲ့ LCD မှာလိုမဟုတျဘဲ လာမယျ့ နှဈထုတျ iPhone တှရေဲ့ OLED Screen မှာ 120Hz Screen တပျထားမှာပါ။ ဇူလိုငျကလညျး Ice Universe က 2020 iPhone မြားမှာ 120Hz Screen မြားပါလာနိုငျပွီး Apple ဟာ Samsung, LG တို့နဲ့လညျး ဆှေးနှေးနတေယျလို့ တှဈတာကနေ မြှဝခေဲ့ပါတယျ။
Flagship killer ကွီးလို့ဆိုရမယျ့ OnePlus ကနထှေကျလာမယျ့ OnePlus 8 ပဲဖွဈပါတယျ။ CashKaro နဲ့ OnLeaks တို့ရဲ့ဓါတျပုံတှအေရ OnePlus 8 ဟာ လကျရှိ OnePlus ဖုနျးတှနေဲ့အရမျးကိုတူပါတယျ။ အဓိကပွောငျးလဲမှုတဈခုက Notch နဲ့ Pop-up အစား Punch-hole Camera ပါလာတာ ဖွဈပါတယျ။ OnePlus 8 ရဲ့အနောကျဘကျမှာ ကငျမရာ3လုံး တပျဆငျထားပါတယျ။ OnePlus 7T မှာလို စကျဝိုငျးပုံသဏ်ဍာနျမဟုတျဘဲ ဒေါငျလိုကျဒီဇိုငျးကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ ဒီဖုနျးတှမှော ကွိုးမဲ့အားသှငျးနညျးပညာပါလာမယျလို့ သတငျးထှကျထားပါတယျ။ OnePlus 8 Pro ရဲ့ပုံကွမျးတှလေညျး ပေါကျကွားထှကျပျေါလာပါတယျ။ ဒီဇိုငျးက OnePlus7Pro ကို အနညျးငယျဆနျးသဈထားတဲ့ပုံ ပျေါပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကှဲပွားတာကို တှလေို့ကျရပါတယျ။ ပုံကွမျးမှာ အရှကေ့ငျမရာ 1 လုံးပါတဲ့ မျောဒယျနဲ့2လုံးပါတဲ့ မျောဒယျကို မွငျရပါတယျ။ OnePlus 8 Pro မှာ Notch မပါဘဲ Punch-hole Display ကို သုံးထားပါတယျ။ Pro နဲ့ 8 တို့ရဲ့ဒီဇိုငျးကတျောတျောတူနပေါ တယျ။ ဒါပမေယျ့ သခြောကွညျ့ရငျ Pro ရဲ့အနောကျဘကျမှာ 3D ToF Sensor အပိုထညျ့ထားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Earpiece ကပိုကွီးပါတယျ။ Pro ရဲ့မကျြနှာပွငျ အထကျကဘောငျက အနညျးငယျပိုထူနပေါတယျ။ Pro မှာ 6.65 လကျမမကျြနှာပွငျ ပါလာမှာဖွဈပွီး 8 ထကျ 0.15 လကျမပိုကွီးပါတယျ။ မကွာခငျကလညျး OnePlus 8 Pro မှာ 120Hz Display ပါမယျလို့ သတငျးထှကျလာပါတယျ။
Motorola ရဲ့ Razr clamshell စမတျဖုနျးဟာ အရောငျးရဆုံးဆိုတဲ့ စံခြိနျကောငျးတှရေရှိထားတဲ့ ဖုနျးတလုံးလို့ဆိုရမှာပါ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ အဲ့ဒီဖုနျးတှဟော4နှဈအတှငျး အလုံးရသေနျး 130 နီးပါး ရောငျးခနြိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပွောရမယျဆိုရငျ world best-selling ဖုနျးလို့တောငျ သတျမှတျနိုငျမှာပါ။ အခုထပျလာတာကတော့ foldable design နဲ့ $1500 ဈေးနှုနျး ဝနျးကငျြဖုနျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖုနျးကိုခေါကျခြိုးထားတဲ့အခါမှာ သိပျပွီးမထူအောငျ ဒီဇိုငျးထုတျထားပါတယျ။ အပွငျဘကျမှာ Quick View External Touchscreen တပျဆငျထားပွီး Notification တှကွေညျ့တာနဲ့ သီခငျြးဖှငျ့တာမြိုးတှကေို ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။ ဒီဖုနျးကို ယခုနှဈအတှငျး ရောငျးခမြယျလို့ သတငျးတှထှေကျနပေမေယျ့ ယခုနှဈအစောပိုငျးကို ပွောငျးလဲရောကျရှိသှားနိုငျပါတယျ။ Octa Core Snapdragon 710 10nm သာ သုံးထားတာကတော့ လကျရှိဖုနျးတှနေဲ့ ယှဉျလိုကျမယျဆိုရငျ အတျောလေးကှာဟမှာပါ။
Nokia ဘကျကတော့ ယခုနှဈအတှငျးထှကျလာမယျ့ ဖုနျးတှမှော ကုမ်ပဏီအနနေဲ့ 5G ကှနျရကျကို ထညျ့ပေးထားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကငျမရာပိုငျးအတှကျ 48MP lenses2ခု ပေါငျးစပျပေးမယျလို့သိရပါတယျ။ တခုက wide-angle နဲ့နောကျထပျ တခုက telephoto အတှကျ ဖွဈပါတယျ။ 4-axis OIS ကို ထောကျပံ့ပေးမှာပါ။ အရှဘေ့ကျမှာတော့ 16MP ကငျမရာ တပျထားမှာဖွဈပွီး 1080p နဲ့ 4K videos တှကေို ရိုကျကူးနိုငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ရပါတယျ။ display ကလညျး 6.0 ကနေ 6.5 inches. ကွားရှိမှာပါ။ ဒါ့အပွငျ ဘကျထရီအားသှငျးစနဈအတှကျ quick charge 4+ ၊ water-resistant, dust-resistant တို့လိုမြိုးတှပေါ ထောကျပံ့ပေးနိုငျပါလိမျ့မယျ။ အဲ့ဒီစမတျဖုနျးမှာ in-display fingerprint scanner ပါဝငျလာမှာ ဖွဈတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။ ဒီအခကျြအလကျတှဟော လကျရှိအခြိနျထိတော့ ကောလာဟလအဆငျ့မှာသာ ရှိပါသေး တယျ။ ဒီထကျပိုတိကတြဲ့ အခကျြအလကျတှေ ထှကျလာနိုငျပါသေးတယျ။
တခွားကုမ်ပဏီတှကေတော့ foldable smartphone တှထေုတျနပွေီး apple ဆီကနရေော အဲ့လို device မြိုးမြှျောလငျ့လို့ မရနိုငျဘူးလား။ ယခုနှဈအတှငျးပွောခဲ့တာကတော့ Apple အနနေဲ့ foldable phone တှထေုတျလာအုံးမှာ မဟုတျဘူး ဆိုတာပါ။ ဒါပမေယျ့လညျး တခွားဘကျကနကွေညျ့မယျဆိုရငျတော့ Apple အနနေဲ့ foldable phone ဒီဇိုငျးကို မူပိုငျခှငျ့တငျ ထားပါတယျ။ သူဟာ Samsung Galaxy Fold လို အတှငျးဘကျကို ခေါကျခြိုးတဲ့ဒီဇိုငျး ဖွဈပါတယျ။ သူ့မှာ Display Layer အပွငျ Protective Cover Layer လညျးပါပါတယျ။ မကျြနှာပွငျရဲ့အထကျမှ Protective Cover Layer ကို Glass, Sapphire, Zirconia မြားနဲ့ပွုလုပျထားမယျလို့ သတငျးထှကျနပေါတယျ။ Apple အနနေဲ့မူပိုငျခှငျ့မှာ Foldable iPhone နဲ့ပတျသတျပွီး ဒီဇိုငျးပုံတှတေငျထားပမေယျ့ အမှနျတကယျထုတျဖို့ကတော့ မသခြောသေးပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ Fan Made Render ရဲ့ပုံတှမှောတော့ သိပျတိကမြှုမရှိသေးပါဘူး။
လကျရှိအခြိနျမှာ Google Pixel4စမတျဖုနျးကို အသုံးပွုနတေဲ့သူ ဘယျလောကျထိရှိနပွေီလုိ့ ထငျပါသလဲ။ လာမယျ့နှဈမှာတော့ Google Pixel5ဖုနျးဟာ အမှနျတကယျထှကျလာမှာပါ။ ဒါဟာအတျောလေး စိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့ ကိစ်စလို့တောငျ ဆိုရမှာပါ။ အခွားစမတျဖုနျး ထုတျလုပျသူတှကေသာ RAM နဲ့ ဘကျထရီပိုငျးတှမှော ပွောငျးလဲတိုးမွငျ့မှုတှေ လုပျလာကွပမေယျ့ android OS ပိုငျဆိုငျသူကွီးကတော့ အရမျးလှုပျလှုပျရှားရှားလုပျတာ မတှရေ့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူ့မှာရှိတဲ့အားသာခကျြက ဖုနျးထဲမှာရှိတဲ့ ပါဝငျပစ်စညျးတှနေဲ့ အကောငျးဆုံးထိနျးခြုပျ အလုပျလုပျနိုငျတာပါ။ စာရှကျပျေါက အခကျြအလကျတှေ ကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ Pixel ဖုနျးတှကေ အခွားဖုနျးတှနေဲ့ ယှဉျလိုကျရငျ spec ပိုငျးအားနညျးနတေယျလို့ ထငျရပမေယျ့ လကျတှသေုံ့းကွညျ့လိုကျတဲ့အခါမှာ အခွားအဆငျ့မွငျ့ ဖုနျးတှအေတိုငျးပဲ လုပျဆောငျခကျြပိုငျး ကောငျးမှနျတာကိုတှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။
2020 မှာ သင့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုစမတ်ဖုန်းမျိုးကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူဖို့ ပြင်ဆင်နေသလဲ . . .? သင်ကိုင်ဆောင်ချင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းမျိုးကရော ဈေးကွက်ထဲကိုရောက်နေပြီလား . . . ? အောက်မှာတော့ ယခုနှစ်အတွင်း သင့်အနေနဲ့ မဖြစ်မနေ စောင့်ဆိုင်း ဝယ်ယူသင့်တဲ့ ဖုန်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် . . . ။
Apple အနေနဲ့ နောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ထားတဲ့ iPhone XR မှာ LCD screen ကိုသာသုံးထားပါတယ်။ 2020 မှာတော့ ပြောင်းလဲမှုတွေကြုံရမှာပါ။ အသစ်ထွက်လာမယ့် iPhone XII ဖုန်းတွေမှာတော့ OLED screens ကို သုံးလာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြီးတော့ မျိုးဆက်သစ်ဖုန်းတွေမှာ 5G ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုကို ထည့်သွင်းလာမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် AI ပိုင်းမှာလည်း ပိုကောင်းလာဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ iPhone XII Pro နဲ့ iPhone XII Max ကို 2020 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ ကြေညာမှာဖြစ်ပြီး သူတို့မှာ 6GB RAM ပါလာမယ်လို့ Barclays ရဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်သူ Blayne Curtis ကပြောပါတယ်။ ဒါဟာ ကြိုဆိုချင်စရာကောင်းလှတဲ့ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲတိုးတက်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် iPhone 11 Pro နဲ့ iPhone 11 Pro Max တွေမှာ 4GB RAM ပဲပါလာတာပါ။ ပုံမှန် iPhone XII မှာတော့ iPhone 11 အတိုင်း 4GB RAM ပဲပါလာမယ်လို့ သတင်းထွက်လာပါတယ်။ DigiTimes က 2020 iPhone တွေမှာ 120Hz Screen ပါမယ်လို့ အရင်က သတင်းပေးထားပါတယ်။ iPad Pro တွေရဲ့ Refresh Rate နဲ့တူသွားမှာပါ။ဒါပေမယ့်iPadတွေရဲ့ LCD မှာလိုမဟုတ်ဘဲ လာမယ့် နှစ်ထုတ် iPhone တွေရဲ့ OLED Screen မှာ 120Hz Screen တပ်ထားမှာပါ။ ဇူလိုင်ကလည်း Ice Universe က 2020 iPhone များမှာ 120Hz Screen များပါလာနိုင်ပြီး Apple ဟာ Samsung, LG တို့နဲ့လည်း ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ တွစ်တာကနေ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
Flagship killer ကြီးလို့ဆိုရမယ့် OnePlus ကနေထွက်လာမယ့် OnePlus 8 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ CashKaro နဲ့ OnLeaks တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေအရ OnePlus 8 ဟာ လက်ရှိ OnePlus ဖုန်းတွေနဲ့အရမ်းကိုတူပါတယ်။ အဓိကပြောင်းလဲမှုတစ်ခုက Notch နဲ့ Pop-up အစား Punch-hole Camera ပါလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ OnePlus 8 ရဲ့အနောက်ဘက်မှာ ကင်မရာ3လုံး တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ OnePlus 7T မှာလို စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ်ဘဲ ဒေါင်လိုက်ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒီဖုန်းတွေမှာ ကြိုးမဲ့အားသွင်းနည်းပညာပါလာမယ်လို့ သတင်းထွက်ထားပါတယ်။ OnePlus 8 Pro ရဲ့ပုံကြမ်းတွေလည်း ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီဇိုင်းက OnePlus7Pro ကို အနည်းငယ်ဆန်းသစ်ထားတဲ့ပုံ ပေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကွဲပြားတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ပုံကြမ်းမှာ အရှေ့ကင်မရာ 1 လုံးပါတဲ့ မော်ဒယ်နဲ့2လုံးပါတဲ့ မော်ဒယ်ကို မြင်ရပါတယ်။ OnePlus 8 Pro မှာ Notch မပါဘဲ Punch-hole Display ကို သုံးထားပါတယ်။ Pro နဲ့ 8 တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းကတော်တော်တူနေပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာကြည့်ရင် Pro ရဲ့အနောက်ဘက်မှာ 3D ToF Sensor အပိုထည့်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Earpiece ကပိုကြီးပါတယ်။ Pro ရဲ့မျက်နှာပြင် အထက်ကဘောင်က အနည်းငယ်ပိုထူနေပါတယ်။ Pro မှာ 6.65 လက်မမျက်နှာပြင် ပါလာမှာဖြစ်ပြီး 8 ထက် 0.15 လက်မပိုကြီးပါတယ်။ မကြာခင်ကလည်း OnePlus 8 Pro မှာ 120Hz Display ပါမယ်လို့ သတင်းထွက်လာပါတယ်။
Motorola ရဲ့ Razr clamshell စမတ်ဖုန်းဟာ အရောင်းရဆုံးဆိုတဲ့ စံချိန်ကောင်းတွေရရှိထားတဲ့ ဖုန်းတလုံးလို့ဆိုရမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အဲ့ဒီဖုန်းတွေဟာ4နှစ်အတွင်း အလုံးရေသန်း 130 နီးပါး ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် world best-selling ဖုန်းလို့တောင် သတ်မှတ်နိုင်မှာပါ။ အခုထပ်လာတာကတော့ foldable design နဲ့ $1500 ဈေးနှုန်း ဝန်းကျင်ဖုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းကိုခေါက်ချိုးထားတဲ့အခါမှာ သိပ်ပြီးမထူအောင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။ အပြင်ဘက်မှာ Quick View External Touchscreen တပ်ဆင်ထားပြီး Notification တွေကြည့်တာနဲ့ သီချင်းဖွင့်တာမျိုးတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဖုန်းကို ယခုနှစ်အတွင်း ရောင်းချမယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေပေမယ့် ယခုနှစ်အစောပိုင်းကို ပြောင်းလဲရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။ Octa Core Snapdragon 710 10nm သာ သုံးထားတာကတော့ လက်ရှိဖုန်းတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အတော်လေးကွာဟမှာပါ။
Nokia ဘက်ကတော့ ယခုနှစ်အတွင်းထွက်လာမယ့် ဖုန်းတွေမှာ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ 5G ကွန်ရက်ကို ထည့်ပေးထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာပိုင်းအတွက် 48MP lenses2ခု ပေါင်းစပ်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ တခုက wide-angle နဲ့နောက်ထပ် တခုက telephoto အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ 4-axis OIS ကို ထောက်ပံ့ပေးမှာပါ။ အရှေ့ဘက်မှာတော့ 16MP ကင်မရာ တပ်ထားမှာဖြစ်ပြီး 1080p နဲ့ 4K videos တွေကို ရိုက်ကူးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ display ကလည်း 6.0 ကနေ 6.5 inches. ကြားရှိမှာပါ။ ဒါ့အပြင် ဘက်ထရီအားသွင်းစနစ်အတွက် quick charge 4+ ၊ water-resistant, dust-resistant တို့လိုမျိုးတွေပါ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီစမတ်ဖုန်းမှာ in-display fingerprint scanner ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေဟာ လက်ရှိအချိန်ထိတော့ ကောလာဟလအဆင့်မှာသာ ရှိပါသေး တယ်။ ဒီထက်ပိုတိကျတဲ့ အချက်အလက်တွေ ထွက်လာနိုင်ပါသေးတယ်။
တခြားကုမ္ပဏီတွေကတော့ foldable smartphone တွေထုတ်နေပြီး apple ဆီကနေရော အဲ့လို device မျိုးမျှော်လင့်လို့ မရနိုင်ဘူးလား။ ယခုနှစ်အတွင်းပြောခဲ့တာကတော့ Apple အနေနဲ့ foldable phone တွေထုတ်လာအုံးမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း တခြားဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Apple အနေနဲ့ foldable phone ဒီဇိုင်းကို မူပိုင်ခွင့်တင် ထားပါတယ်။ သူဟာ Samsung Galaxy Fold လို အတွင်းဘက်ကို ခေါက်ချိုးတဲ့ဒီဇိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ Display Layer အပြင် Protective Cover Layer လည်းပါပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ရဲ့အထက်မှ Protective Cover Layer ကို Glass, Sapphire, Zirconia များနဲ့ပြုလုပ်ထားမယ်လို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။ Apple အနေနဲ့မူပိုင်ခွင့်မှာ Foldable iPhone နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဒီဇိုင်းပုံတွေတင်ထားပေမယ့် အမှန်တကယ်ထုတ်ဖို့ကတော့ မသေချာသေးပါဘူး။ ဒါ့အပြင် Fan Made Render ရဲ့ပုံတွေမှာတော့ သိပ်တိကျမှုမရှိသေးပါဘူး။
လက်ရှိအချိန်မှာ Google Pixel4စမတ်ဖုန်းကို အသုံးပြုနေတဲ့သူ ဘယ်လောက်ထိရှိနေပြီလုိ့ ထင်ပါသလဲ။ လာမယ့်နှစ်မှာတော့ Google Pixel5ဖုန်းဟာ အမှန်တကယ်ထွက်လာမှာပါ။ ဒါဟာအတော်လေး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ကိစ္စလို့တောင် ဆိုရမှာပါ။ အခြားစမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူတွေကသာ RAM နဲ့ ဘက်ထရီပိုင်းတွေမှာ ပြောင်းလဲတိုးမြင့်မှုတွေ လုပ်လာကြပေမယ့် android OS ပိုင်ဆိုင်သူကြီးကတော့ အရမ်းလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်တာ မတွေ့ရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာရှိတဲ့အားသာချက်က ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အကောင်းဆုံးထိန်းချုပ် အလုပ်လုပ်နိုင်တာပါ။ စာရွက်ပေါ်က အချက်အလက်တွေ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Pixel ဖုန်းတွေက အခြားဖုန်းတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် spec ပိုင်းအားနည်းနေတယ် လို့ ထင်ရပေမယ့် လက်တွေ့သုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ အခြားအဆင့်မြင့် ဖုန်းတွေအတိုင်းပဲ လုပ်ဆောင်ချက်ပိုင်း ကောင်းမွန် တာကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Next articleHonor 30S တှငျ ကြောဘကျကငျမရာလေးလုံး၊ 5G Chipset သဈ၊ 40W Fast Charging ပါဝငျလာမယျ့ Honor 30S